हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् - FroggyAds अनलाइन विज्ञापन नेटवर्क
हामी यहाँ छौं तपाईको सामान्य प्रश्नहरुको उत्तर दिन।
म फ्रोग्या एड्सको साथ कसरी खाता सिर्जना गर्ने?
ड्यासबोर्ड के हो?
म कसरी अभियान सिर्जना गर्ने?
अभियान स्तरमा दैनिक छाप क्याप के हो?
म कसरी विज्ञापन सिर्जना गर्ने?
म कसरी मेरो विज्ञापन क्लोन गर्ने?
कुन लक्ष्यीकरण विकल्पहरूलाई तपाईंले अनुमति दिनुहुन्छ?
म कसरी देश विशिष्ट क्यारियरहरू भेट्टाउन सक्छु?
तपाईले खोज्नु भएको वाहक भेट्टाउन सक्नुहुन्न?
तपाइँसँग कुन च्यानल कोटी छ?
कुन देशमा तपाईसँग ट्राफिक छ?
कुन देशमा सबैभन्दा अधिक खण्ड छ?
तपाईको म्याक्रोहरू के हुन्?
के विज्ञापन एकाइहरू उपलब्ध छन्?
छाप क्यापिंग के हो?
डेलिभरी विधि "द्रुत" वा "महीन" को मतलब के हो?
फ्रिक्वेन्सी क्यापिंग भनेको के हो?
SUBIDs के हो र म यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने?
म कसरी रूपान्तरणहरू ट्र्याक गर्न सक्छु?
तपाईंसँग पिक्सेल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन छ?
के म डोमेन ब्लक गर्न सक्छ ताकि मेरो विज्ञापन तिनीहरूमा नदेखाऊ?
तपाइँ कुन भुक्तानी स्वीकार गर्नुहुन्छ?
न्यूनतम निक्षेप के हो?
के तपाइँसँग एक रकम फिर्ता नीति छ?
भुक्तानीको लागि अनुमोदन प्रक्रिया के हो?
विज्ञापनहरूका लागि अनुमोदन प्रक्रिया के हो?
विज्ञापनको कारण अस्वीकृत भयो?
म कसरी मेरो खाता जानकारी अपडेट गर्ने (पासवर्ड परिवर्तन)?
किन मेरो विज्ञापनले कुनै प्रभाव पाइरहेको छैन?
म कसरी मेरो भुक्तान ईतिहास जाँच गर्न सक्छु?
म प्लेटफर्मको इनभ्वाइसहरू कसरी पुल गर्छु?
तपाईको न्यूनतम सीपीएम बिड के हो?
औसत बिड के हो?
के तपाईंको दर महँगो छ?
म कसरी अधिक यातायात पाउन सक्छु?
तपाईको यातायात कसरी परिवर्तन हुँदैछ?
कस्तो प्रकारको रिपोर्टिंग तपाई प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
के तपाईं एकीकरण साझेदारी प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
तपाइँ कहाँ अवस्थित हुनुहुन्छ?
तपाइँ यहाँ एक खाता बनाउन सक्नुहुन्छ https://premium.froggyads.com/#/signup.	एकचोटि तपाईंले त्यसो गरिसकेपछि, तपाईं प्लेटफर्ममा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ अभियानहरू, विज्ञापनहरू र लगत फन्डहरू सिर्जना गर्न सुरू गर्न।
Top शीर्षमा फिर्ता
तपाईको ड्यासबोर्ड लगइनमा तपाईको प्रारम्भिक पृष्ठ हो। तपाईंको ड्यासबोर्डले तपाईंलाई तपाईंको सबै जानकारीको शेष रकमको अवलोकन गर्न अनुमति दिन्छ, आजको खर्च, हिजो खर्च, कुल खर्च, कुल भुक्तानी, अन्तिम भुक्तानी, दिनको लागि छापहरू।
तपाईंको ड्यासबोर्डमा शीर्षमा त्यहाँ अभियान ट्याब छ, क्लिक गर्नुहोस् र तपाईं यहाँ नयाँ अभियान थप्न सक्नुहुन्छ। वैकल्पिक रूपमा तपाईको ड्यासबोर्डमा, "खाता सिंहावलोकन" अन्तर्गत ड्यासबोर्डको दायाँ तिर तपाईले "नयाँ" ड्रपडाउन बटन देख्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र "अभियान" क्लिक गर्नुहोस्।
* तपाइँले विज्ञापन सिर्जना गर्नु अघि तपाइँले एक अभियान सिर्जना गर्नु पर्छ *
यो सुविधा प्रयोग गर्नको लागि मात्र हो यदि तपाईं सम्पूर्ण अभियानको लागि छाप क्याप सेट गर्न चाहानुहुन्छ। जब अभियान छाप क्यापमा पुग्छ, अभियान रोकिनेछ। तपाईंसँग प्रति विज्ञापन छाप क्याप सेट गर्ने क्षमता पनि छ, जुन प्राय: प्रयोग गरिन्छ। यसको उद्देश्य भनेको सुविधाको उद्देश्य हो यदि उदाहरणका लागि, तपाईंसँग अभियानमा १० विज्ञापनहरू छन्, र तपाईं कुल १,००,००० प्रभावहरू चाहानुहुन्छ जुनसुकै विज्ञापन सर्वरहरूले बढी प्रभावहरू राख्दछन् वा गर्दैनन्, त्यसो भए तपाईं अभियानका लागि क्यापको रूपमा १,००,००० सेट गर्नुहुनेछ। जहाँसम्म तपाईं प्रत्येक विज्ञापन समान रूपले १०,००,००० छापहरू (१० विज्ञापनहरू, जुन १,००,००० सम्म थप्दछ) प्रस्तुत गर्न चाहानुहुन्छ भने त्यसको सट्टा तपाईं अभियान स्तरमा छाप क्याप सेट गर्नुहुन्न तर प्रति विज्ञापन छाप क्याप सेटअप गर्नुहुनेछ।
तपाईंले विज्ञापन बनाउनु अघि एउटा अभियान सिर्जना गर्नुपर्नेछ। Adverts अभियान को भित्र बस्दछन्। तपाईंको ड्यासबोर्डमा शीर्ष क्लिक अभियानहरू साथ, त्यसपछि अभियानमा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यहाँबाट तपाईं विज्ञापनहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। वैकल्पिक रूपमा तपाईं नयाँ खाताहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको ड्यासबोर्डबाट, ड्यासबोर्डको दायाँ तिर "खाता सिंहावलोकन" अन्तर्गत, तपाई "नयाँ" ड्रपडाउन बटन देख्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र "विज्ञापन" क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंसँग तपाईंको अभियान र विज्ञापन दुबै क्लोनिंग गर्ने विकल्प छ। क्लोनिंग गरेर, यसले तपाईंको उही समान सेटिंग्स / लक्षित विकल्पहरूको साथ विज्ञापन सिर्जना गरेर तपाईंको समय बचत गर्दछ। तपाईंसँग सिर्जनात्मक वा ट्यागहरू प्रतिस्थापन गर्ने क्षमता छ, घटनामा तपाईं समान लक्ष्यीकरण सेटि settingsहरू राख्न क्लोन गर्न चाहनुहुन्छ तर नयाँ विज्ञापन रचनात्मकको लागि यसलाई लागू गर्न चाहनुहुन्छ।
उदाहरण: यो समयको लागि राम्रो हो जुन तपाईं "पपअप" र "पपअपकर्ता" बीचमा विभाजन गर्न चाहानुहुन्छ। त्यो अवस्थामा यदि तपाईंसँग पहिले नै पपअप अभियानहरू प्रत्यक्ष छन् र ठीक समान अभियान सेट अप गर्न चाहनुहुन्छ तर पपन्डर परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं केवल क्लोन गर्नुहुन्छ तर "विज्ञापन प्रकार" परिवर्तन गर्दै।
समय लक्ष्यीकरण वाहक लक्ष्यीकरण
डेस्कटप वा मोबाइल
तपाईं गुगल वा अन्य खोजी ईन्जिनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ सम्पूर्ण क्यारियरहरू जुन पूरा देशमा पूरा सूची फेला पार्नको लागि।
गुगल वा अन्य खोज इञ्जिनहरू प्रयोग गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि क्यारियरको वैकल्पिक नामहरू छन् कि छैन, त्यस्ता तल सबै समान कम्पनिहरू छन्, तर हामीसँग टेलसेल हाम्रो प्लेटफर्ममा सूचीबद्ध छैन।
रन अफ अफ नेटवर्क - कुनै नग्नता, यौन सुझाव, १++ सामग्री / रचनात्मक, डाउनलोड (फ्ल्यास / जाभा अपडेट) विज्ञापनहरू स्वीकार गर्न सक्दैन।
वयस्क - वयस्क वेबसाइट, वयस्क र मुख्यधार विज्ञापन दुवै स्वीकार गर्दछ।
सफ्टवेयर - सबै कुरा स्वीकार गर्दछ।
१ 196 over भन्दा धेरै देशहरूमा ट्राफिक।
हामी सही मात्रा प्रदान गर्न सक्दैनौं किनकि भोल्यूम / ट्राफिक सँधै अस्थिर हुन्छ। यदि तपाइँको बिड प्रतिस्पर्धी हो भने पर्याप्त मात्रा एक मुद्दा होइन।
कृपया तल हाम्रो म्याक्रोहरूको सूची हेर्नुहोस्, तपाईं यी सबै म्याक्रोहरू पनि देख्नुहुनेछ विज्ञापन निर्माण पृष्ठमा सूचीबद्ध
[CLICK_ID] - एक अद्वितीय क्लिक आईडी फर्काउँछ
[MACMD5] - म्याक MD5 ह्यास फर्काउँछ
[आईएफए] - IFA फर्काउँछ
[PUB_IAB_CAT] - प्रकाशक IAB कोटी फर्काउँछ
[HTTP_REFERRER] - आगन्तुकको HTTP रेफर फर्काउँछ
[DOMAIN] - डोमेन नाम फर्काउँछ
[IMPPressION_ID] - एक अद्वितीय छाप ID फर्काउँछ
[प्रयोगकर्ता ID] - आगन्तुकको एक अद्वितीय आईडी फर्काउँछ
[WINNING_PRICE] - छाप को जीतने मूल्य फिर्ता
[CAMPAIGN_ID] - हाम्रो प्रणालीमा एक अद्वितीय अभियान आईडी फर्काउँछ
[CREATIVE_ID] - हाम्रो प्रणालीमा एक अद्वितीय रचनात्मक आईडी फर्काउँछ
[SSP_ID] - एक अद्वितीय SSP आईडी फर्काउँछ
[PUBLISHER_ID] - प्रकाशकको ​​अद्वितीय आईडी फर्काउँछ जुन धेरै वेबसाइटहरू समावेश गर्न सक्दछ
[SITE_ID] - एक अद्वितीय वेबसाइट आईडी फर्काउँछ
[PLACEMENT_ID] - एक अद्वितीय विज्ञापन प्लेसमेन्ट आईडी फर्काउँछ
[COUNTRY] - देशको नाम फर्काउँछ
[SOURCE_ID] - ट्राफिक स्रोतको प्रकाशक आईडी "+" समावेश गर्दछ: "+ साइट आईडी +": "+ प्लेसमेन्ट आईडी समावेश अद्वितीय आईडी फर्काउँछ।
[KEYWORD] - एक कुञ्जी शब्द फिर्ता गर्छ (यदि कुनै छ भने)
[UNENCODED_CLICK_REDIRECT] - अननकोड गरिएको क्लिक पुनर्निर्देशित गर्दछ
[ENCODED_CLICK_REDIRECT] - ईन्कोड गरिएको क्लिक रिडाइरेक्टरी फिर्ता गर्दछ
[DBL - ENCODED_CLICK_REDIRECT] - डबल ईन्कोड गरिएको क्लिक पुन: र्निर्देशित फर्काउँछ
[RANDOM_NUMBER] - एक अनियमित संख्या फर्काउँछ
[BID_ID] - अद्वितीय बोली आईडी फर्काउँछ
कृपया क्लिक आईडी पास गर्नुहोस् - [CLICK_ID] - उपलब्ध युटिएम प्यारामिटर मध्ये एकमा क्लिक विसंगतिबाट बच्न।
उदाहरण: http://domain.com/?utm_source=mittedSOURCE_ID क्षेत्र&utm_medium=cpc&utm_camp अभियान=dsp&utm_content=mittedCLICK_ID]
प्रदर्शन ब्यानर विज्ञापन का सबै आकार
दैनिक प्रभाव क्याप: यो सुविधा एक "विज्ञापन" मा वितरण रोक्छ एक पटक टोपी भेटिए पछि अर्को दिन पुनः सुरु हुन्छ (क्याप दैनिक रिसेट गर्दछ जस्तै)।
यो कसरी तपाइँको विज्ञापन मा तपाइँको छापहरू पुर्‍याउने मा एल्गोरिथ्म छ, कृपया तल वर्णन हेर्नुहोस्;
छिटो - छिटो भन्दा छिटो डेलिभर गर्नुहोस्
चिकना - समान रूपमा दिन भरमा छापहरू प्रदान गर्दछ, दैनिक छाप टोपी १०,००० वा सो भन्दा माथि हुनुपर्दछ।
यस सुविधाले समय अवधिमा प्रयोगकर्ताले तपाईंको विज्ञापन देख्ने मात्रामा क्याप गर्नु हो। सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको २/२1 हो जसको अर्थ हो कि प्रयोगकर्ताले प्रति २ 24 घण्टाको आधारमा तपाइँको विज्ञापन मात्र देख्दछ।
SUBIDs भनेको के हो तपाईंलाई तपाईंको अभियानहरू अनुकूलित गर्न, प्रत्येक SUBID एक वेबसाइट प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन हाम्रो नेटवर्कको अंश हो जहाँ तपाईंको विज्ञापन देखाइन्छ। तपाईले हाम्रो प्लेटफर्ममा रिपोर्टहरू तान्न सक्नुहुन्छ कि कुन सुबिदले तपाईलाई रूपान्तरण गर्दैछ, र कुन होइन। त्यहाँबाट तपाइँसँग सेतोसूची वा कालोसूची SUBIDs गर्न क्षमता छ जसले तपाईंलाई प्लेसमेन्टमा तपाईंको खर्च अधिकतम बनाउन मद्दत गर्दछ जुन तपाईंको लागि प्रदर्शन गर्दैछ।
तपाईं कि त छवि पिक्सेल वा S2S (सर्वर-देखि सर्वर पिक्सेल) रूपान्तरण ट्र्याक गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
हो तपाईको स्वागत इ-मेलमा तपाईले सेटअप गाईडहरू पाउनुहुनेछ
हो विज्ञापन गुण पृष्ठमा तपाईंसँग ब्लक गर्न डोमेनहरू थप्ने क्षमता छ, त्यसैले तपाईंको विज्ञापनहरू यी डोमेनहरूमा देखाउँदैन।
हामी सबै प्रकारका क्रेडिट कार्डहरू, WebMoney, PayPal वा बैंक वायर भुक्तानीहरू स्वीकार गर्दछौं।
हो, हामी, कृपया प्लेटफर्मबाट अनुरोध बुझाउनुहोस् र फिर्ती १ 14 दिन भित्र जारी हुनेछ, तपाईंको PayPal खातामा फिर्ता।
जब तपाईं हाम्रो प्लेटफर्ममा भुक्तानी गर्नुहुन्छ तिनीहरू २ 24 घण्टा भित्र अनुमोदित हुन्छन् (सामान्यतया धेरै छिटो)। तार स्थान्तरणहरूको लागि जहाँ हामीलाई रकम प्राप्त गर्न ढिलाइ हुन्छ, हामीले हाम्रो अन्तमा कोषहरूको पुष्टि गरे पछि यो तपाईंको खातामा तपाईंको ब्यालेन्समा थपिने छ।
विज्ञापनहरू २ approved घण्टा भित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत हुन्छन्, सामान्यतया भन्दा यो भन्दा छिटो। जबसम्म तिनीहरूले हाम्रो दिशानिर्देशहरू पालन गर्छन्, तिनीहरू अनुमोदन हुनेछन्।
हाम्रो नेटवर्कमा चलाउन अस्वीकार विज्ञापनको कारण विभिन्न कारणहरू हुन सक्छ। हामी तपाइँको लक्षित सेटिंग्स, बिड दरहरू पनि हेर्छौं, यो ठीक छ भनि सुनिश्चित गर्न, किनभने तपाइँ तपाइँको रकम खेर फाल्न चाहनुहुन्न किनकि तपाइँले गलत सेटिंग्स इनपुट गर्नुभयो! जब तपाइँको विज्ञापन अस्वीकृत हुन्छ तपाईले यसको कारण पाउनुहुनेछ, तर केहि सामान्य कारणहरू भनेका छन्
हाम्रो नियम र सर्तहरूको पालना गर्दैन
विज्ञापन राम्रोसँग लोड हुँदैन, खाली विज्ञापन
विज्ञापन गलत च्यानल / कोटी लक्षित गर्दै छ, जस्तै वयस्क विज्ञापन लक्ष्यित-रन-अफ-नेटवर्क
लक्ष्यीकरण चयन गरिएको छैन
जब तपाईं माथि दायाँ प्लेटफर्ममा लगईन गर्नुहुन्छ त्यहाँ ट्याब हुन्छ "खाता" क्लिक गर्नुहोस् जुन यसले तपाईंलाई तपाईंको जानकारी अपडेट गर्न अनुमति दिनेछ।
कृपया प्लेटफर्ममा विज्ञापनका निम्न चीजहरू जाँच गर्नुहोस्, किनकि ती विज्ञापनको कारण छापहरू प्राप्त गर्दैनन् भन्ने कारणहरू हुन्;
निश्चित गर्नुहोस् कि "सक्रिय" विज्ञापन सेटिंग्स मा जाँच गरीएको छ
लक्षित मापदण्डको जाँच गर्नुहोस् (समय-लक्ष्यीकरण)
तपाईंको खातामा अपर्याप्त ब्यालेन्स छ
सुरु मिति भविष्यको मितिको लागि सेट हुन सक्छ
बिड दर एकदम कम छ
यदि यी मध्ये कुनै पनि लागू हुँदैन भने कृपया समर्थन मार्फत हामीलाई सन्देश पठाउनुहोस् ताकि हामी यसलाई तपाईंको लागि हेर्न सक्दछौं।
तपाइँको लगइनमा शीर्षसँग त्यहाँ ट्याब रहेको छ "बिलि” "यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, र तपाइँ तपाइँको भुक्तानीको इतिहास देख्नुहुनेछ र ब्यालेन्स अप गर्न क्षमताको साथ।
तपाइँको लगइनमा शीर्षमा त्यहाँ एक ट्याब रहेको छ "बिलि” "यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, र तपाइँ यहाँबाट इनभ्वाइसहरू तान्न सक्नुहुनेछ।
न्यूनतम बोलपत्र निर्भर गर्दछ यदि यो ब्यानर वा पूर्ण पृष्ठ विज्ञापन हो, र यो देश तपाइँ लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईं विज्ञापन निर्माण पृष्ठमा न्यूनतम बिडहरू देख्न सक्नुहुनेछ।
औसत बोली प्रायः उतार-चढाव हुन्छ त्यसैले हामी यहाँ प्रदान गर्न सक्ने कुनै स्पष्ट उत्तर छैन। यदि तपाईंलाई सूची मनपर्‍यो भने, तपाईंले बढि यातायात र उत्तम रोटेशन प्राप्त गर्न बोली बढाउनुपर्नेछ जसले उच्च नतिजा प्राप्त गर्न सक्दछ।
हामी ट्राफिक प्लेटफर्म हो जुन बिडिंग मोडलमा काम गर्दछ। तपाईं अन्य खरीददारहरूको बिरूद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, यसैले दरहरू सबै अन्य विज्ञापनदाता द्वारा निर्धारण गरिन्छ। यदि ती उच्च बोलपत्रमा छन् भने, तपाईंले ट्राफिक प्राप्त गर्न खरीददारहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक छ, यदि उनीहरूले कम बोलपत्र गरे भने तपाईंको बोलीहरू कम हुन सक्दछ।
यदि तपाईं आफूले चाहानु भएको ट्राफिकको मात्रा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्न भने, तपाईंको सीपीएम दर बढाउने प्रयास गर्नुहोस्, किनकि तपाईंको बोली दर एकदम कम हुन सक्छ र यसैले अन्य खरीददारहरूले बढी बोली लगाइरहेका छन् र ट्राफिक जितेका छन्।
त्यहाँ धेरै चरहरू छन् किन ट्राफिक रूपान्तरण हुन सक्दैन। हामीसँग आन्तरिक अडिटिंगको साथमा स्वामित्व प्लेटफर्म छ जुन जालसाजी यातायात अवरुद्ध गर्दछ, र हामी हाम्रा खरीददारहरूलाई ट्राफिक वैध हो कि भनेर निर्धारण गर्न तेस्रो पार्टी अडिटि companies कम्पनीहरू प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छौं। जबसम्म यातायात वैध हो भन्दा हामी कुनै रूपान्तरणको लागि ट्राफिक स्रोत वा प्लेटफर्मलाई दोष दिन सक्दैनौं। तल सामान्य कारणहरू छन् जुन तपाईं रूपान्तरणहरू देख्नुहुन्न
तपाईंको विज्ञापन पृष्ठमा त्रुटिहरू छन् र त्यसैले प्रयोगकर्ताहरू पूरा गर्न सक्षम छैनन्
बिड दर बढाउनुहोस्, किनकि अन्य खरीददारहरू त्यस्तै विज्ञापनहरू चल्दैछन् र प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको विज्ञापन पहिले हेर्नको लागि, यसैले रूपान्तरण तपाईको सट्टामा उनीहरूमा जान्छ।
काम गरिरहेका स्रोतहरू निर्धारण गर्न मद्दतको लागि हाम्रो रिपोर्टि system प्रणालीको उपयोग गर्नुहोस् र उत्तम परिणामहरू प्राप्त गर्न अनुकूलित गर्नुहोस्।
हाम्रो मजबूत रिपोर्टिंग प्रणालीले तपाईंलाई सजिलैसँग विस्तृत रिपोर्टहरूमा उच्च स्तर तान्न अनुमति दिन्छ। रिपोर्टिंग पनि वास्तविक समय हो।
हाम्रो मुख्य कार्यालय आरहस / टिल्ट, डेनमार्क मा छ।